चिकित्सा शिक्षा के हो? | गठन र अध्ययन
माइट निक्यूसा | 28/11/2021 20:37 | प्रशिक्षण
शिक्षा शास्त्र शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यावश्यक शाखा हो। सिक्ने प्रक्रिया व्यक्तिगत छ किनभने प्रत्येक विद्यार्थीको आफ्नै ताल हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न शिक्षाको क्षेत्रमा समान अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। र द चिकित्सकीय शिक्षाशास्त्र एक आवश्यक मिशन पूरा गर्दछ। यो अवस्था मा, पेडागोगले विशेष शैक्षिक आवश्यकता भएका बालबालिका र युवाहरूलाई मार्गदर्शन, समर्थन र साथ दिन्छ.
यस तरिकाले, समर्थन कार्यक्रमहरू डिजाइन गरिएका छन् जसले एक विशेष हस्तक्षेप देखाउँदछ जुन यथार्थपरक उद्देश्यहरूसँग पङ्क्तिबद्ध छ। लक्ष्यहरू जसले स्वायत्तता र व्यक्तिगत क्षमताहरूको विकासलाई बढाउँछ।
1 चिकित्सीय शिक्षाशास्त्र के का लागि हो?
2 चिकित्सीय पेडागोगले के कार्य गर्दछ?
चिकित्सीय शिक्षाशास्त्र के का लागि हो?
चिकित्सकीय पेडागोगको काम व्यावसायिक छ। उत्कृष्ट पेशेवरहरू केवल ती व्यक्तिहरू होइनन् जससँग प्रशिक्षण छ जसले तिनीहरूलाई विशेष स्थानहरू प्रदर्शन गर्न सक्षम बनाउँछ। गरेको कामको आनन्द लिनको लागि पेशा प्रमुख हो। एक काम जुन मानव दृष्टिकोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। चिकित्सीय पेडागोगलाई थाहा छ कि एक व्यक्तिलाई सर्त गर्ने सम्भावित सीमाहरू के हुन् तपाईको सिकाइ गतिमा। तर उसले आफ्नो शक्तिको बारेमा पनि सचेत छ र व्यक्तिको क्षमतालाई ध्यानमा राख्छ। अर्थात्, नयाँ लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा अगाडि बढ्ने उनीहरूको क्षमता।
चिकित्सकीय पेडागोग सिकाइको सहजकर्ता हो। उहाँ एक पेशेवर हुनुहुन्छ जससँग प्रत्येक व्यक्तिलाई समर्थन र मार्गदर्शन गर्न अनुभव, क्षमता, सीप र योग्यताहरू छन्।
यस क्षेत्रमा आफ्नो काम विकास गर्ने धेरै पेशेवरहरूले मास्टर डिग्री पूरा गर्छन् जसले अध्ययनको मुख्य वस्तुको रूपमा चिकित्सीय अध्यापनशास्त्रमा जान्छन्। विद्यार्थीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकताहरू अनुरूप योजनाहरूको विकास यो सधैं यसको वास्तविकताको ज्ञानबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसकारण, प्रभावकारी हस्तक्षेपका विभिन्न तरिकाहरू विकास गर्न परिस्थितिको निदान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। चिकित्सीय शिक्षाशास्त्रको विभिन्न क्षेत्रहरूमा आवेदनको दायरा छ।
चिकित्सीय पेडागोगले के कार्य गर्दछ?
उदाहरण को लागी, लेख्न र पढ्न सिक्न मा। मानिसले आफ्नो बाल्यकालमा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान मध्ये दुई। वास्तवमा, पाठ पढ्न र बुझ्ने क्षमता, साथै कागजमा सामग्री लेख्न, अन्य उद्देश्यहरूको पूर्तिलाई बढावा दिन्छ। तर पढ्ने र लेख्ने दुई प्रकारका सिकाइ हुन् जुन सबै अवस्थामा एक रेखीय लय पालना गर्दैनन्। प्रत्येक व्यक्तिसँग एक प्रक्रिया हुन्छ जुन शब्दावलीको ठूलो सम्पत्ति प्राप्त गर्न, पढ्ने समझलाई बलियो बनाउन वा लेखन अभ्यास गर्नको लागि जानुपर्छ।
हामीले संकेत गरिसकेका छौं, चिकित्सकीय पेडागोगले काम गर्दछ जुन मानव दृष्टिकोणबाट धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र त्यहाँ मानव प्रकृतिमा निहित कारकहरू छन् जुन यस अनुशासनको केन्द्रबिन्दु पनि बन्छन्। यो ध्यानमा राख्नु पर्छ कि मानिस सामाजिक छ र फलस्वरूप, अरूसँगको सम्बन्ध खुशीको स्रोत हो। र अझै पनि व्यक्तिले सञ्चार, भावनात्मक व्यवस्थापन, वा सामाजिक सीपहरूको सन्दर्भमा अवरोध र कठिनाइहरू पनि अनुभव गर्न सक्छ। चिकित्सीय शिक्षाशास्त्रले पारस्परिक सम्बन्धहरू बढाउन उपयोगी उपकरणहरू पनि प्रदान गर्दछ।
प्रारम्भिक हेरचाह कार्यहरू डिजाइन गर्न चिकित्सकीय शिक्षाशास्त्र आवश्यक छ। यो अनुशासन शैक्षिक क्षेत्रमा आवश्यक छ। र यो परिवारहरूको लागि समर्थनको इन्जिन पनि हो जसले प्रायः विचलित महसुस गर्छन् जब उनीहरूसँग प्रश्नहरू छन् जसको लागि उनीहरूले स्पष्ट जवाफ पाउन सक्दैनन्। यसरी, शिक्षक, परिवार र शिक्षकहरूले टोलीको रूपमा काम गर्न सक्छन् बच्चाको आवश्यकता पूरा गर्न।
विशेष शैक्षिक आवश्यकताहरू पूरा गर्नमा केन्द्रित हस्तक्षेप कार्यहरूले विद्यार्थीहरूको आत्म-सम्मानलाई पनि बलियो बनाउँछ। विद्यार्थीहरू जसले नयाँ चुनौतीहरू पार गर्छन् र समयसँगै हासिल गरिएका उद्देश्यहरूसँग सन्तुष्टि अनुभव गर्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » प्रशिक्षण » चिकित्सा शिक्षा के हो?